Dingana 3 mankany amin'ny paikady nomerika matanjaka ho an'ireo mpanonta izay manosika ny fifandraisana sy ny vola miditra | Martech Zone
Rehefa nifindra bebe kokoa tamin'ny fanjifana vaovao an-tserasera ny mpanjifa ary manana safidy maro hafa azo atao, dia hitan'ny mpanonta pirinty ny fidoboky ny volany. Ary ho an'ny maro, sarotra ny nifanaraka tamin'ny paikady nomerika izay tena mandeha. Lozam-pifamoivoizana no nanjo ny Paywalls tamin'ny ankapobeny, nanosika ny mpamandrika handeha ho any amin'ny habetsahan'ny atiny malalaka. Nanampy ny doka aseho sy ny atiny tohana, fa ny programa mivarotra mivantana kosa dia miasa mafy sy mandany vola, ka mahatonga azy ireo tsy ho tratry ny mpanonta kely an'arivony kely.
Ny fahitana tamba-jotra dokam-barotra hamenoana ny lisitra automatique dia somary nahomby ihany, saingy miankina betsaka amin'ny cookies ho an'ny kendren'ny mpihaino izany, ka niteraka sakana lehibe efatra. Voalohany, ny cookies dia tsy mbola marina. Izy ireo dia voafaritra manokana amin'ny fitaovana, ka tsy afaka manavaka ny mpampiasa marobe amin'ny fitaovana iraisana (takelaka ampiasain'ny olona maro ao amin'ny ankohonana, ohatra), izay midika fa manjavozavo sy tsy marina ny angona angoniny. Ny cookies dia tsy afaka manaraka ny mpampiasa avy amin'ny fitaovana iray mankany amin'ny iray hafa. Raha mivadika solosaina finday ny mpampiasa iray dia very ny lalan'ny cookie.
Faharoa, tsy nety niditra ny cookies. Hatramin'izao fotoana izao, ny cookies dia nanara-maso ireo mpampiasa tsy misy fankatoavana azy ireo, ary matetika tsy misy ny fahalalany, miteraka ahiahy amin'ny fiainana manokana. Fahatelo, ireo mpanakana doka sy fizahana manokana dia nametraka ny kibosh tamin'ny fanarahan-dia miorina amin'ny cookie satria nitati-baovao momba ny fomba fampiasan'ny orinasa - na diso fampiasa, araka ny tranga misy - nanakorontana ny fitokisana ny antontan-taratasin'ireo mpanatrika, nahatonga ny mpampiasa hampiahiahy sy tsy mahazo aina. Ary farany, ny fandraràna vao tsy ela ny cookies an'ny antoko fahatelo an'ny mpitsikilo lehibe rehetra dia nanjary tsy nanan-kery tokoa ny cookies tambajotra doka.
Mandritra izany fotoana izany, sahirana ihany koa ireo mpanonta hanararaotra ireo tambajotra sosialy hitondrana fidiram-bola - na angamba marimarina kokoa, ny tambajotra sosialy dia nanararaotra ireo mpanonta. Tsy hoe nangalatra ampahany betsaka amin'ny fandaniana doka fotsiny ireo sehatra ireo, fa nanosika ny atin'ny mpanonta hiala amin'ny newsfeed ihany koa, ary manararaotra ny fotoana azon'ny mpanonta manatona ny mpihaino azy ireo.
Ary ny fitsofana farany: fifamoivoizana ara-tsosialy dia fifamoivoizana 100%, izay midika fa raha misy mpampiasa manindry ny tranokalan'ny mpanonta, dia tsy mahazo miditra amin'ny angon-drakitra ny mpamoaka. Satria tsy afaka mahafantatra ireo mpitsidika referral ireo izy ireo, dia tsy azo atao ny mianatra ny zavatra mahaliana azy ireo ary mampiasa izany fahalalana izany mba hanompoana bebe kokoa ny zavatra tian'izy ireo hitazomana sy hiverenan'izy ireo.
Ka inona no hataon'ny mpanonta? Mba hampifanarahana ity zava-misy vaovao ity dia tsy maintsy mifehy bebe kokoa ny fifandraisan'ny mpihaino ny mpanonta ary manangana fifandraisana matanjaka kokoa fa tsy miantehitra amin'ny antoko fahatelo. Ity ny fomba hanombohana paikady nomerika telo dingana izay mametraka ny mpitory ho lohany ary mitondra fidiram-bola vaovao.
Dingana 1: tompony ny mpihaino anao
Manana ny mpihaino anao. Raha tokony hiantehitra amin'ny antoko fahatelo toy ny cookies sy ny fantsom-piarahamonina ianao, dia mifantoha amin'ny fananganana ny mpamorona anao amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana ho an'ireo mailaka mailakao. Satria tsy dia mizara adiresy mailaka mihitsy ny olona, ​​ary mitovy amin'ny isaky ny fitaovana rehetra, dia mpamaritra tokana marina sy mahomby kokoa ny mailaka noho ny cookies. Ary tsy toy ny fantsom-piarahamonina, afaka mifanerasera amin'ny mpampiasa mivantana amin'ny alàlan'ny mailaka ianao, manapaka ny afovoany.
Amin'ity firotsahana mivantana ity dia azonao atao ny manomboka manangana sary feno kokoa momba izay tadiavin'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fanarahana ny fihetsik'izy ireo sy ny fianarany ny zavatra mahaliana azy ireo na dia amin'ireo fitaovana sy fantsona aza. Ary, satria opt-in tanteraka ny mailaka, nomen'ny mpampiasa alalana ho anao hianaranao ny fihetsik'izy ireo, noho izany dia misy fahatokisana avo kokoa.
Dingana 2: Manararaotra ireo fantsona fananana amin'ireo fantsona fahatelo
Mampiasà fantsona mivantana toy ny mailaka ary fampandrenesana fanosehana hampidirana mpamandrika araka izay tratra fa tsy ara-tsosialy sy karoka. Averina indray, miaraka amin'ny fiaraha-monina sy ny fikarohana dia mametraka antoko fahatelo ianao hifehy ny fifandraisan'ny mpihaino anao. Ireny mpiandry vavahady ireny dia tsy manjaka amin'ny fidiram-bolan'ny dokambarotra ihany fa koa ny angona momba ny mpampiasa, ka tsy afaka hianatra momba ny zavatra tiany sy mahaliana azy ianao. Ny famindrana ny fifantohanao mankany amin'ny fantsona voafehinao dia midika hoe mifehy ny angon-drakitra mpampiasa ihany koa ianao.
Dingana 3: Alefaso ny atiny namboarina
Ankehitriny rehefa fantatrao bebe kokoa momba izay tadiavin'ny mpanjifa tsirairay dia azonao atao ny mampiasa ireo fantsona ireo handefasana atiny natokana ho an'ny tsirairay. Raha tokony ho mailaka-sy-fipoahana iray, mailaka na hafatra iray habe izay mandeha amin'ny mpamandrika rehetra, ny fandefasana atiny namboarina dia voaporofo fa mahomby kokoa amin'ny fampidirana ny mpamandrika sy ny fambolena fifandraisana maharitra.
Fa Lalao GoGy, sehatra filalaovana an-tserasera, fandefasana fampandrenesana fanesorana manokana dia ampahany lehibe tamin'ny tetikadin'izy ireo mahomby.
Ny fahaizana mandefa ny hafatra mety sy ny fampandrenesana mifandraika indrindra amin'ny mpampiasa tsirairay dia tena zava-dehibe. Izy ireo dia mitady zavatra manokana, ary ny lazan'ny lalao dia tena zava-dehibe ihany koa. Tian'izy ireo ny milalao izay lalaovin'ny tsirairay ary izy irery no nanampy tamin'ny fampiakarana ny tahan'ny tsindry-thru.
Tal Hen, Tompon'ny GoGy
Ity paikadim-pahefana namboarina ity dia efa nampiasain'ny mpanonta toa an'i GoGy, Assembly, Salem Web Network, Dysplay ary Almamanc an'ny tantsaha ho:
Vonjeo fampandrenesana maherin'ny 2 miliara volana iray
Mandeha a Fiakarana 25% amin'ny fivezivezena
Mandeha a 40% fiakarana eo amin'ny pejy
Mandeha a Ny fitomboan'ny 35% amin'ny fidiram-bola.
Na dia hita fa mahomby aza ny paikady dia mety manontany tena ianao hoe:
Iza no manam-potoana sy loharano handefasana mailaka manokana sy handefasana fampandrenesana ho an'ny mpanjifa aman'hetsiny na an-tapitrisany?
Eo no idiran'ny mandeha ho azy. Ny Jeeng an'ny PowerInbox Manolotra vahaolana tsotra sy mandeha ho azy ny sehatra handefasana fanairana manokana sy fampandrenesana mailaka ho an'ireo mpamandrika amin'ny fiezahana aotra tanana. Namboarina manokana ho an'ny mpampanonta, ny teknolojia fianarana ny milina an'i Jeeng dia mianatra ny tian'ny mpampiasa sy ny fitondran-tenany an-tserasera hanomezana fampandrenesana tena ilaina, namboarina ary lasibatra izay mitarika ny firotsahan'ny mpampiasa.
Ankoatry ny fanomezana vahaolana mandeha ho azy tanteraka, ao anatin'izany ny fahaizana mandahatra fampandrenesana hanatsarana ny firosoana, i Jeeng aza mamela ny mpitory hanana vola amin'ny alàlan'ny fandefasana sy fandefasana mailaka hanampiana fidiram-bola fanampiny. Ary, amin'ny maodelin'ny fizarana fidiram-bola an'i Jeeng, ny mpitory dia afaka manampy an'ity vahaolana fampidirana mandeha ho azy mahery vaika ity miaraka amin'ny sarany aotra mialoha.
Amin'ny alàlan'ny fananganana paikady fizarana atiny manokana hampiarahana ny fantsona ahafahan'ny mpamoaka hanana ny fifandraisan'ny mpihaino, ny mpitory dia afaka mamily ny fifamoivoizana bebe kokoa — sy ny fifamoivoizana avo lenta kokoa — miverina amin'ny pejiny manokana, noho izany mitondra fidiram-bola avo kokoa. Ny fianarana ny zavatra tadiavin'ny mpihaino anao dia manakiana be ao amin'ity dingana ity ary tsy azonao atao tsotra izao izany rehefa miankina amin'ny fantsom-pifandraisana avy amin'ny antoko fahatelo ianao. Ny fifehezana izany fifandraisana amin'ireo fantsona fananana no fomba tsara indrindra hananganana paikady nomerika izay mampitombo ny mpihaino anao sy ny vola miditra.
Hahafantatra ny fomba hanampian'ny Jeeng mandeha ho azy tanteraka an'ny PowerInbox:
Midira amin'ny fampisehoana anio
Tags: mpanakana ny dokafizarana atinyCookiesjeengfianarana milinafampandrenesana findaymisafidy-inownedhaino aman-jery tomponypowerinboxfanindriana fampandrenesanafantsona referral
Statistika CRM 2020: Ny fampiasana, tombontsoa ary fanamby amin'ny sehatry ny fitantanana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa
Ianaro ny fomba hampitomboana ny vola miditra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny hery lehibe ateraky ny boaty fitadiavana kely